डा. बास्तोलाको सुझाब : डेंगुका बिरामीको उपचारमा एन्टिबायोटिक र पेनकिलरको प्रयोग नगर्नुहोस् – Health Post Nepal
२०७६ भदौ ३१ गते १५:०४
डाक्टर : कहाँबाट आउनुभयो ? के भयो ?
बिरामी : यहीँ डल्लुबाट । एक साता भयो, ज्वरो आएको छ, आँखाको नानी दुख्छ, शरीर पूरै करकरी दुख्छ, टाउको फुल्टाजसरी दुखिरहन्छ ।’
डाक्टर : औषधिको प्रयोग गर्नुभएको छ ?
बिरामी : छ, डाक्टर सा’ब । यही हो औषधि मेडिकलबाट दिनुभएको, खाइरहेको छु, तर सन्चो भएन ।
डाक्टर : ओहो ! एन्टिबायोटिक, पेनकिलर पो खानुभएको रहेछ ! तपाईंलाई डेंगु भएको हो । आँखाका नानी दुख्नु, शरीर दुख्नु, टाउको बेसरी दुख्नु डेंगुका लक्षण हुन् । डेंगु हुँदा एन्टिबायोटिक, पेनकिलर खानुपर्दैन । बस, घरमा बसेर झोलिलो कुरा र सिटामोल खानुहोस्, बिस्तारै सन्चो हुँदै जान्छ ।
सोमबार बिहान टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट सरुवारोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले उपचारका लागि आएका एक बिरामीसित गरेको संवाद हो यो ।
श्रीमान्लाई ज्वरो आएपछि गत साता काठमाडौंको स्वयम्भूनजिक डल्लु बस्ने रीता भुजेलले घरनजिकैको एक मेडिकलमा जाँच गराइन् । क्लिनिकमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि त्यहाँ उनलाई झोलाभरि एन्टिबोयोटिक, पेनकिलरजस्ता औषधि दिएर पठाए । मेडिकलमा दिइएको एन्टिबोयोटिक, पेनकिलर खाएपछि पनि ठिक नभएर उनी सोमबार बिहानै श्रीमान्लाई टेकु अस्पताल आएकी थिइन् ।
डेंगु संक्रमित बिरामी यति पुगे, यतिको मृत्यु भयो भनेर गनेर मात्र बस्यौँ । यसको रोकथामका लागि व्यवहार परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको डा. बास्तोलाको बुझाइ छ । उनका अनुसार लामखुट्टेको टोकाइबाट कसरी बच्ने भन्ने जानकारी आममानिसमा हुनु जरुरी छ ।
यी मात्र होइनन्, ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक खाएर ठिक नभएपछि डेंगुको आशंकामा टेकु अस्पताल आउने बिरामी सयौँको संख्यामा छन् । देशभर डेंगुले महामारीको रूप लिइरहँदा उपचारसमेत कतै अलमलिन पुगेको छ । बिरामीमा मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीमा समेत डेंगुरोग र त्यसको उपचारबारे चेतनामा कहीँ–कतै कमी भएझैँ देखिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण बिरामी सामान्य प्यारासिटामोल झोलिलो पदार्थको सेवन गरेर आराम गरेमा निको हुने डेंगुका लागि अनावश्यक एन्टिबायोटिक र पेनकिलरको सेवनबाट शरीरलाई थप हानि पुर्याउन बाध्य छन् ।
डेंगुमा एन्टिबायोटिक, पेनकिलर तथा फ्लेक्सन सेवनले आन्द्रामा असर
डेंगु संक्रमितले एन्टिबोयोटिक खानुपर्दैन, तर धेरै क्लिनिक तथा मेडिकलमा परीक्षण गराएका बिरामीलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा फार्मेसी सञ्चालक स्वयंले पनि एन्टिबोयोटिक, पेनकिलरजस्ता अनाश्वयक औषधि सेवन गराइरहेको डा. बास्तोला बताउँछन् । ‘सामान्यतया डेंगु भएका बिरामीलाई प्रशस्त पानी पिएर आराम गर्दा सामान्य प्यारासिटामोलको सेवनले नै रोग ठिक हुन्छ,’ बास्तोला भन्छन्, ‘डेंगु लागेका बिरामीले फ्लेक्सन, एन्टिबोयोटिक, पेनकिलर सेवन नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ, किनकि फ्लेक्सन खाँदा आन्द्रा सुन्निने, रगतमा प्लेटलेट कम भएका वेला रगत बग्न सक्नेजस्ता जोखिम निम्तिन सक्छन् ।’
९३ प्रतिशतमा अनावश्यक एन्टिबायोटिकको प्रयोग
‘डेंगुमा एन्टिबायोटिक चलाउने विभिन्न आधार हुन्छन्– वृद्ध अवस्थाको बिरामी छ, डेंगुका लक्षण भयानक रूपमा देखिएका छन्, ७ दिनभन्दा बढी ज्वरो आएको छ, सोडियम घटेर गएको छ, डेंगुका साधारणभन्दा जटिलखालका लक्षण देखिएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र एन्टिबायोटिक्स चलाउनुपर्ने हुन्छ,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘तर, डेंगु ज्वरो आएका प्रत्येक बिरामीलाई चिकित्सकले अनावश्यक रूपमा एन्टिबायोटिक चलाएको पाइन्छ । हामीले ९३ प्रतिशतलाई अनावश्यक रूपमा एन्टिबायोटिक चलाइरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।’
डेंगु ज्वरो सामान्य ज्वरो हो । यसमा दुखाइ धेरै हुने गर्छ । यसको व्यवस्थापन सामान्य झोल कुरा तथा सिटामोल खाएर गर्न सकिन्छ । डेंगु हुँदा देखिने समान्य लक्षणमा ज्वरो आउने, आँखाको नानी दुख्ने, शरीरमा स–साना डाबर आउने, खाना नरुच्ने, जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, पेटमा गडबडी हुने गर्छन् । केही व्यक्तिमा भने जटिलखाले लक्षणसमेत देखिने गर्छन् ।
एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोग अहिले ५६ भन्दा बढी जिल्लामा फैलिएको छ । एकपटक लामखुट्टे संक्रमित भएपछि त्यसबाट संक्रमित भएका लामखुट्टेले टोक्दा डेंगुका बिरामी बढ्दै गएको डा. बास्तोलाको भनाइ छ । विशेषगरी, डेंगु सार्ने लामखुट्टेले सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्छ । प्रायः वर्षाको पानी जम्ने जथाभावी फालेका बोतल, टिनका भाँडा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, गमला, पानीका ट्ंयाकी आदिमा यसले फुल पार्छ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू थुप्रै हुने भएकाले पनि सहरमा बढी लामखुट्टे देखिने गर्छन् ।
डेंगुका सामान्य तथा जटिल लक्षण
डेंगु ज्वरो सामान्य ज्वरो हो । यसमा दुखाइ धेरै हुने गर्छ । यसको व्यवस्थापन सामान्य झोल कुरा तथा सिटामोल खाएर गर्न सकिन्छ । डेंगु हुँदा देखिने समान्य लक्षणमा ज्वरो आउने, आँखाको नानी दुख्ने, शरीरमा स–साना डाबर आउने, खाना नरुच्ने, जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, पेटमा गडबडी हुने गर्छन् । केही व्यक्तिमा भने जटिलखाले लक्षणसमेत देखिने गर्छन् । यदि बिरामीलाई उल्टी हुने, गिजाबाट रगत आउने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, कालो रङको दिसा आउने, उल्टी हुँदा रगत देखिने, बिरामी मूच्र्छा हुने भयो भने चिकित्सकको सल्लाहअनुसार स्वास्थ्यसंस्थामा भर्ना हुनेपर्ने डा. बास्तोला बताउँछन् ।
बच्ने उपाय : व्यवहार परिवर्तन
डेंगु संक्रमित बिरामी यति पुगे, यतिको मृत्यु भयो भनेर गनेर मात्र बस्यौँ । यसको रोकथामका लागि व्यवहार परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको डा. बास्तोलाको बुझाइ छ । उनका अनुसार लामखुट्टेको टोकाइबाट कसरी बच्ने भन्ने जानकारी आममानिसमा हुनु जरुरी छ । ‘बाहिर निस्कँदा शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर निस्कने, घरका झ्यालढोकामा जाली हाल्ने, दिउँसो सुत्दा झुल हाल्नेजस्ता पक्षलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘तर, हामी डेंगुका केस कति आए भनेर दौडिरहेका छौँ, डेंगु सार्ने लामखुट्टेको अन्त्यका लागि कमै मात्र लागेका छौँ । खोइ ‘खोज र नष्ट गर’ अभियानलाई व्यवहारमा उतारेको ? त्यसबारे जनमानसमा पर्याप्त सूचना दिनु जरुरी छ ।’
लामखुट्टेको लार्भा यस्तो हुन्छ, त्यसलाई यसरी खोजेर नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने डा. बास्तोला बताउँछन् । ‘खोज र नष्ट गर अभियानलाई महाअभियानका रूपमा निरन्तर चलाउनुपर्छ,’ बास्तोला भन्छन्, ‘जसरी वाग्मतीबाट फोहोर निकालेर सफा गरियो, त्यसैगरी घर–घरबाट डेंगुका लार्भाको वासस्थान खोजेर नष्ट गर्नु जरुरी छ ।’